သီပေါမင်း က အတုလား ? အစစ်လား ? - TAWTHU
သီပေါမင်း က အတုလား ? အစစ်လား ?
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတက်လာနေတဲ့ သီပေါမင်း အတုအစစ် ကိစ္စလေးကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြချင်လို့ ပါ
ဒါကလည်း ကျမရဲ့ အမြင်ကို တင်ပြခြင်းပါ
အခြားသောသူတွေနဲ့ကွဲလွဲခြင်းလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်….
#သီပေါမင်း အတုဆိုတာကို ဘယ်လိုအထောက်အထားနဲ့ ဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲ ?
ဆိုတာ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်ပါကျမအနေနဲ့ ကတော့ လက်မခံပါဘူး ….
ပါတော်မူသွားတာဟာ သီပေါမင်းအစစ် လို့ ပဲယူဆ သတ်မှတ်ပါတယ်…
ရွှေနန်းတော်ကို ၀ိုင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချိန်အနည်းငယ်သာ ရလိုက်တာကိုသမိုင်းမှာလည်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လူစားလဲဖို့ ဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာပါ
နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် အနေနဲ့ လည်းလုံခြုံ ရေးကို တင်းကျပ်စွာ ချထားမယ်ဆ်ိုတာကလည်းယုံမှားသံသယ ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး …သိရှိရ သလောက်ကလည်း အလွန်ဆုံးဥယျာဉ်တော်အတွင်း၌သာ စံမြန်းစေခဲ့တယ်လို့ လေ့လာမှတ်သားဖူးခဲ့ပါတယ်….
#ပါတော်မူရာ မှာလည်း စုဖုရားလတ်လှူ ဒါန်းထားတဲ့ မြတောင်ကျောင်းကို ရေစက်ချခွင့်ကိုလည်း ခေါ်ဆောင်ရာ ဗီဒိုလှည်းပေါ်မှာပဲ ချစေခြင်းအားဖြင့် လုံခြုံရေးကို လှစ်ဟာမှူအနည်းငယ်မှ မရှိရလေအောင် စီမံထားကြောင်း ပေါ်လွင်ပါတယ်…
လူစားလဲတယ် ဆိုရင်တောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရပါမယ်တစ်နည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမျိူးပေါ့
#အလယ်နန်းမိဖုရား ဆင်ဖြူ မရှင်ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းတို့ ရဲ့ စေစားခြင်းကို ကြိုးဆွဲရာကခြင်းဖြင့်ကပြအသုံးတော်ခံ ခဲ့ရတဲ့ နာမ်ရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ပါ…
#လောင်းရှည်မိဖုရားရဲ့ သား ဘုန်းကြီးလူထွက်ကလေးဟာ..
စိတ်သဘောထားနူးညံ့ရာကနေပျော့ညံ့ ခြင်းဘက် ကူးပြောင်းသွားသူတစ်ယောက်ဆိုတာယုံမှားသံသယဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး …
တောင်သမန်လယ်စားမောင်ဖေငယ်နဲ့ ရနောင်မောင်မောင်တုတ် တို့ ဝန်းရံခဲ့လို့ နန်းစည်းစိမ်မှာ အခန့် သားထိုင်ရတဲ့သူကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ဆိုတာ ရှားပါးသူပါ…..
ကိုယ်စားရတဲ့ #သီပေါဆိုတဲ့ မြို့ ကလေးကိုတောင်ဘယ်အရပ်မျက်နှာလှည့်သလဲ ??မသိတဲ့ ဘုရင်အုပ်ချူ ပ်တဲ့တိုင်းပြည်..
သူ့ ကျွန် ဘ၀ ရောက်တာ ရင်နာစရာ….
#ဒိုင်းခင်ခင်နဲ့ သူ့ ရင်သွေးကို မျက်ကွယ်ပြုတဲ့သူ သူ့ မယားနဲ့ သားကိုတောင်မကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဟာဒီတိုင်းပြည်ကို မကာကွယ်နိုင်တာဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးလေ….
ကျရာနေစေရာသွား နေတတ်တဲ့သူဟာလူစားလဲပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့ ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ???
ကျန်တဲ့ မဟာဆီမဟာသွေးတွေဟာလည်းသူတို့ တွေ သုတ်သင်လို့ ကံတော်ကုန် ကြပြီဆိုလေတော့တိုင်းပြည်ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ပြီလေ….
#တတိယသမီးတော်နဲ့ စတုတ္တသမီးတော်တို့ ကို ရတနာဂီရိမှာပဲ ဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စုဖုရားလတ်အနေဖြင့်ကိုယ့်ခင်ပွန်းမဟုတ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လည်းကျမကယူဆသတ်မှတ်ပါတယ်….
အကျဉ်းစံဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ ခဲ့ရလို့ လုံခြုံ ရေး လျှော့ချရပါတယ် ဆိုတာလေးနဲ့ သီပေါမင်းဟာ အတုတဲ့လား ???
အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရင်ကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာကို ပြောင်းပြန်ကိုင်မိတာလေးနဲ့ သီပေါမင်းဟာ အတုတဲ့လား ???
ဒီအချက်တွေလောက်နဲ့ တော့အတုဆိုတာ မခိုင်လုံပါဘူး
စုဖုရားလတ်ဟာသီပေါမင်းရဲ့အလောင်းတော်ကိုမြန်မာပြည်ပြန်သယ်ခွင့်ရဖို့ အရေးသူ မကြိုးပမ်းလောက်ဘူးထင်တာပါပဲ
သူ့ခင်ပွန်းဖြစ်လို့ သာ သူကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ….
စုဖုရားကြီး လက်ထဲကနေလုယူခဲ့ရတဲ့ သူ့ ချစ်လင်ပါ…
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်စေခဲ့တဲ့စုဖုရားလတ်ဟာ သီပေါမင်းကို အသက်ထက်ဆုံးရိုးမြေကျပေါင်းသင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားပါတယ်….
••• နေ ရောင် ခြည်•••
24.2.2018 ( Sat )
သီပေါမငျး က အတုလား ? အစဈလား ?
ဒီရကျပိုငျး သတငျးတကျလာနတေဲ့ သီပေါမငျး အတုအစဈ ကိစ်စလေးကိုနညျးနညျးလောကျပွောပွခငျြလို့ ပါ
ဒါကလညျး ကမြရဲ့ အမွငျကို တငျပွခွငျးပါ
အခွားသောသူတှနေဲ့ကှဲလှဲခွငျးလညျး ရှိကောငျး ရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ….
#သီပေါမငျး အတုဆိုတာကို ဘယျလိုအထောကျအထားနဲ့ ဘယျလိုသိနိုငျတာလဲ ?
ဆိုတာ အငျမတနျစိတျဝငျစားစရာ အခကျြပါကမြအနနေဲ့ ကတော့ လကျမခံပါဘူး ….
ပါတျောမူသှားတာဟာ သီပေါမငျးအစဈ လို့ ပဲယူဆ သတျမှတျပါတယျ…
ရှနေနျးတျောကို ၀ိုငျးပွီးနောကျပိုငျးမှာအခြိနျအနညျးငယျသာ ရလိုကျတာကိုသမိုငျးမှာလညျးဖျောပွထားတဲ့အတှကျလူစားလဲဖို့ ဟာ မဖွဈနိုငျတဲ့ အနအေထားမှာပါ
နယျခြဲ့ အင်ျဂလိပျ အနနေဲ့ လညျးလုံခွုံ ရေးကို တငျးကပျြစှာ ခထြားမယျဆျိုတာကလညျးယုံမှားသံသယ ဖွဈစရာမရှိပါဘူး …သိရှိရ သလောကျကလညျး အလှနျဆုံးဥယြာဉျတျောအတှငျး၌သာ စံမွနျးစခေဲ့တယျလို့ လလေ့ာမှတျသားဖူးခဲ့ပါတယျ….
#ပါတျောမူရာ မှာလညျး စုဖုရားလတျလှူ ဒါနျးထားတဲ့ မွတောငျကြောငျးကို ရစေကျခခြှငျ့ကိုလညျး ချေါဆောငျရာ ဗီဒိုလှညျးပျေါမှာပဲ ခစြခွေငျးအားဖွငျ့ လုံခွုံရေးကို လှဈဟာမှူအနညျးငယျမှ မရှိရလအေောငျ စီမံထားကွောငျး ပျေါလှငျပါတယျ…
လူစားလဲတယျ ဆိုရငျတောငျရညျရှယျခကျြရှိရပါမယျတဈနညျးအားဖွငျ့နိုငျငံတျောကို ပွနျလညျရယူဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျတာမြိူးပေါ့
#အလယျနနျးမိဖုရား ဆငျဖွူ မရှငျကငျးဝနျမငျးကွီး ဦးကောငျးတို့ ရဲ့ စစေားခွငျးကို ကွိုးဆှဲရာကခွငျးဖွငျ့ကပွအသုံးတျောခံ ခဲ့ရတဲ့ နာမျရုပျကလေးတဈရုပျပါ…
#လောငျးရှညျမိဖုရားရဲ့ သား ဘုနျးကွီးလူထှကျကလေးဟာ..
စိတျသဘောထားနူးညံ့ရာကနပြေော့ညံ့ ခွငျးဘကျ ကူးပွောငျးသှားသူတဈယောကျဆိုတာယုံမှားသံသယဖွဈစရာ မရှိပါဘူး …
တောငျသမနျလယျစားမောငျဖငေယျနဲ့ ရနောငျမောငျမောငျတုတျ တို့ ဝနျးရံခဲ့လို့ နနျးစညျးစိမျမှာ အခနျ့ သားထိုငျရတဲ့သူကိုယျစှမျးကိုယျစ ဆိုတာ ရှားပါးသူပါ…..
ကိုယျစားရတဲ့ #သီပေါဆိုတဲ့ မွို့ ကလေးကိုတောငျဘယျအရပျမကျြနှာလှညျ့သလဲ ??မသိတဲ့ ဘုရငျအုပျခြူ ပျတဲ့တိုငျးပွညျ..
သူ့ ကြှနျ ဘဝ ရောကျတာ ရငျနာစရာ….
#ဒိုငျးခငျခငျနဲ့ သူ့ ရငျသှေးကို မကျြကှယျပွုတဲ့သူ သူ့ မယားနဲ့ သားကိုတောငျမကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့သူဟာဒီတိုငျးပွညျကို မကာကှယျနိုငျတာဆနျးတော့မဆနျးပါဘူးလေ….
ကရြာနစေရောသှား နတေတျတဲ့သူဟာလူစားလဲပွီး တိုငျးပွညျကို ပွနျလညျကယျတငျဖို့ ဆိုတာဖွဈနိုငျပါ့မလား ???
ကနျြတဲ့ မဟာဆီမဟာသှေးတှဟောလညျးသူတို့ တှေ သုတျသငျလို့ ကံတျောကုနျ ကွပွီဆိုလတေော့တိုငျးပွညျကံဆိုးမိုးမှောငျကခြဲ့ပွီလေ….
#တတိယသမီးတျောနဲ့ စတုတ်တသမီးတျောတို့ ကို ရတနာဂီရိမှာပဲ ဖှားမွငျခဲ့တာဖွဈတဲ့အတှကျစုဖုရားလတျအနဖွေငျ့ကိုယျ့ခငျပှနျးမဟုတျတဲ့သူနဲ့ ပေါငျးသငျးနထေိုငျမှာ မဟုတျဘူးလို့ လညျးကမြကယူဆသတျမှတျပါတယျ….
အကဉျြးစံဘဝကနေ လှတျမွောကျအောငျအားထုတျခွငျးတဈစုံတဈရာမတှေ့ ခဲ့ရလို့ လုံခွုံ ရေး လြှော့ခရြပါတယျ ဆိုတာလေးနဲ့ သီပေါမငျးဟာ အတုတဲ့လား ???
အင်ျဂလိပျစာ ကြှမျးကငျြတဲ့ဘုရငျကအင်ျဂလိပျသတငျးစာကို ပွောငျးပွနျကိုငျမိတာလေးနဲ့ သီပေါမငျးဟာ အတုတဲ့လား ???
ဒီအခကျြတှလေောကျနဲ့ တော့အတုဆိုတာ မခိုငျလုံပါဘူး
စုဖုရားလတျဟာသီပေါမငျးရဲ့အလောငျးတျောကိုမွနျမာပွညျပွနျသယျခှငျ့ရဖို့ အရေးသူ မကွိုးပမျးလောကျဘူးထငျတာပါပဲ
သူ့ခငျပှနျးဖွဈလို့ သာ သူကွိုးပမျးခဲ့တာပါ….
စုဖုရားကွီး လကျထဲကနလေုယူခဲ့ရတဲ့ သူ့ ခဈြလငျပါ…
တဈလငျတဈမယားစနဈကို အကောငျအထညျဖျောစခေဲ့တဲ့စုဖုရားလတျဟာ သီပေါမငျးကို အသကျထကျဆုံးရိုးမွကေပြေါငျးသငျးသှားတယျဆိုတာကိုလကျခံထားပါတယျ….
••• နေ ရောငျ ခွညျ•••
မတ်စောက်တဲ့ကျောက်တောင်တွေပေါ်က တောင်ဆိတ်တို့ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရုပ်ဆိုးလို့ အများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရာကနေ အလှဘုရင်မအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်သူ
ထူးခြားပြီး အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာသင်ကျောင်းလေး ၀ါးများနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်..။